15 သင်က Google ကိုထဲသို့ရိုက်ထည့်ပါနိုင်သလားဒါကရယ်စရာအရာ - သတင်း Rule
15 သင်က Google ကိုထဲသို့ရိုက်ထည့်ပါနိုင်သလားဒါကရယ်စရာအရာ
သင့် browser အောင်မှသင်၏ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုနှင့်အတူ Breakout ၏တစ်ဦးအမြန်ဂိမ်းကစားမယ့် '' စည်လိပ် '' ပြုပါ, Google ရဲ့အပြည့်အဝဇာတ်ဆောင်နည်းနည်းအီစတာကြက်ဥ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “15 Google ကသို့ရိုက်ထည့်ဖို့ပျော်စရာအမှုအရာ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 21 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 10.06 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Google ရဲ့အီစတာကြက်ဥ - ရယ်စရာနည်းနည်းပုံရိပ်တွေ, အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်ဝစ်ဂျက်များ - ဒဏ္ဍာရီများမှာ, ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမြုံအိပ်, ရုံရှာဖွေရေးအကွက်ထဲသို့မှော်စကားလုံးမြားကိုရိုက်ထည့်မှအသုံးပြုသူများကိုစောင့်ဆိုင်း.
သူတို့လိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ကြသည်? အချို့မှာ. သူတို့အသုံးဝင်သော Are? အများစုမှာမဟုတ်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအားလုံးအလုပ်လုပ်နေကြိုဆိုအာရုံရောက်နေ. ထိုသူအပေါင်းတို့က desktop ပေါ်မှာ Chrome မှာအလုပ်, လည်းမိုဘိုင်းအပေါ်အများဆုံးအလုပ်, အချို့တို့ကိုလည်းအခြား browser များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်. နှစ်သက်. .
တစ်ဦး oldie ကားအလှဆင်လိုချင်ဖွယ်ရာ. "နှစ်ကြိမ် z သို့မဟုတ် r" သို့မဟုတ် "တစ်စည်လိပ်ပြုပါ" Google ရှာဖွေစာမျက်နှာလိပ်လှန်စေမည်တစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့် 360 ဒီဂရီ. အဘယ်ကြောင့်? သင်တန်း၏ပျော်စရာအဘို့. နှစ်ဦးစလုံးစာပိုဒ်တိုများစတား Fox ကမှတစ်ဦးကိုကိုးကားများမှာ, သောသင်သည်သင်၏တိုက်လေယာဉ်ကျန်ရစ်သို့မဟုတ်ညာဘက်လှိမ့်ဖို့ထက်နှစ်ဆ Z ကိုသို့မဟုတ် R ကိုခလုတ်ထိခဲ့ရတယ်.
Google ကချွတ်ထောင့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Google ကသို့ "askew" ကိုရိုက်ထည့်တဲ့ tilt ထောင့်ကနေတပြင်လုံးကိုစာမကျြနှာကိုချွတ်သတ်မှတ်. "စောင်း" ကိုလည်းလုပ်ကိုင်ဖို့အသုံးပြု, ဒါပေမယ့်ငါကငါ့အစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ဘာမှလုပ်ဖို့မရနိုင်.
Star Wars ကစာသား
Google ရဲ့တွား. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သငျသညျအစဉျအသင်၏ Google ရှာဖွေရေးရလဒ်များ Star Wars အဖွင့်စာသားအန်းမှာစာမျက်နှာချ scroll ချင်တယ်ဖူး? အဘယ်သူမျှမ, ငါလည်းမဟုတ်ဘူး, သင်မူကားဝေးနေတဲ့နဂါးငွေ့တန်းအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့တဲ့ "ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်တတ်နိုင်သမျှ, အဝေးမှာ".
Blink မှိတ်ရှာအနှံ့မျက်တောင်ခတ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
"၌စာရိုက်<အရောင်တမှိတ်>"မှိတ် ... မှိတ်များအတွက် Google ကိုရှာပြီးတော့ရလဒ်တွေအတွက်စကားလုံးမှိတ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဥပမာအားဖြင့်စေသည်. Yep.
ဒါကြောင့်ဖွင့်ကဲ့သို့ Google 1998
အဘယျသို့ Google ကပထမဦးဆုံးစတင်သောအခါအတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သင်ကပထမဦးဆုံးအတွက်ပွင့်လင်းဝဘ်ပေါ်သို့ lurched သောအခါ Google ကသဏ္ဍန်အဘယျသို့သတိရလုပ်ပါ 1998? အဆိုပါဗေဒဆင်တူခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ 2016 ခုနှစ်၏ဝက်ဘ်နှောင်းပိုင်း 1990 ခုနှစ်ကို web ကျော်ဒီဇိုင်းအတွက်ရှေ့ဆက်အတော်လေးအနည်းငယ်ခုန်ဖြစ်ပါသည်. ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဲ့သို့ပထမဦးဆုံးခဲ့သင်တို့ကဲ့သို့အကငျြ့ရှာဖွေမှုများကိုဖွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖူးတဲ့အဘယျသို့ပွဖို့ "1998 ခုနှစ် google" ကိုရိုက်ပါ 18 နှစ်ပေါင်း.
old-style က Google ကိုမတရားသအပြေးအလွှား. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အလုပ်မှာပျင်းနှငျ့သငျမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအရာက Google သည်? ရှာဖွေရေးအကွက်တွင်သို့ "zerg အလုအယက်" ကိုရိုက်ပါ, သူတို့သည်သင်၏စာမျက်နှာစားရန်ကြိုးစားအဖြစ်အသညျးအနညျးငယျကို Google 'o' s ကိုတစ်ဦးတစ်ဟုန်ထိုးကို click ဖို့ထိရိုက်ထည့်ပါနှင့်ပြင်ဆင်မည်. Zerg အလုအယက်ထဲမှာ Zerg ကစားသမားအားဖြင့်အလုပ်တစ်နည်းဗျူဟာခဲ့ 1998 မဟာဗျူဟာဂိမ်း StarCraft, ထိုစျေးပေါရာပေါင်းများစွာပေးပို့ခြင်းပါဝင်ပတ်သက်ရာ, တစ်ဦးပြိုင်ဘက်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့အနိမ့်-Level ယူနစ်.
image ကိုရှာဖွေရေးအတွက် Breakout ျာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာခြိုးဖောကျအုတ်. image ကိုရှာဖွေရေးရလဒ်အုတ်တစ်ဦးလက်တန်းဂိမ်းကို start up ဖို့ Google ရဲ့ image ကိုရှာဖွေရေးသို့ "Atari breakout" ကိုရိုက်ပါ.
ဘဝအသက်တာ၏ Conway ရဲ့ဂိမ်း
ညာလက်ဘက်မှာဘဝတစ်ဂိမ်း၏တစ်ဦးအမြန်အစက်အပြောက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဗြိတိန်နိုင်ငံကသင်္ချာပညာရှင်ဆရာယောဟနျ Horton က Conway ဆယ်လူလာအလိုအလျောက်အဖြစ်ဘဝအသက်တာ၏ဂိမ်းကြံစည်, ကစားသမားအစတင်ပြီး parameter ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကျော်ကြာအဖြစ်ကိုချောင်းမြောင်းဘယ်မှာ. Google ကသို့ "အသကျ conway ရဲ့ဂိမ်း" ကိုရိုက်ထည့်နဲ့ browser မှာ spawn အခြင်း simulation ၏သေးငယ်တဲ့ version ကိုရိုက်ထည့်ရိုက်.
သူတို့အားဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်း! ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
တစ်ဘုံရှာဖွေရေး, သင်မူကားမူရင်း၏ရုပ်တုဆင်းတုကိုအောက်တွင် flashes သောမေးခွန်း box ကိုသင်တို့သိရခဲ့ဘူး 1985 ဂိမ်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်? ရှာဖွေရေးအကွက်တွင်သို့ "Super Mario Bros" ကိုရိုက်ပါ, အအထင်ကရအကြွေစေ့ထွက်ဆွဲလည်းလက်စွပ်ကိုစုဆောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါလျှပ်တစ်ပြက် box ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် hit, မာရီယိုကိုယ်တော်တိုင်ပဲ box ကိုဝင်တိုက်ခဲ့လျှင်အဖြစ်.
အကြွေစေ့ Flip. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ငါတို့ရှိသမျှသည် ပို. ပို. ချိတ်ဆက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်, cashless လူ့အဖွဲ့အစည်း. သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှငျ့သငျရိုးရှင်းစွာအကြွေစေ့နေရာလေးကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ကယ်ဆယ်ရေးဖို့ Google က. type "တဲ့အကြွေစေ့လှန်", သငျသညျကို Google ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် biased ခံရဖို့မ, ဟုတ်ပါတယ်.
တစ်ဦးသေဆုံးလှိမ့်ပုံ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်တစ်ဦးအကြွေစေ့ထက်နည်းနည်းပိုပြီးအဆင့်မြင့်အရာတစ်ခုခုလိုအပ်, သင်မူကားလက်မှမဆိုအန်စာတုံးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. "တစ်ဦးသေဆုံးလှိမ့်" ရှာရန်နှင့် Google သင်တို့အဘို့အပြုမည်.
သင့်ရဲ့ Bacon အရေအတွက်ကဘာလဲ? ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကီဗင် Bacon ၏ Bacon အရေအတွက်သို့မဟုတ်ဒီဂရီကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့မင်းသားကီဗင် Bacon အကြားလင့်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်. ဒါဟာမဆိုတစ်ဦးချင်းစီ Bacon မှရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗီထဲမှာသူသို့မဟုတ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍမှတဆင့်ချိတ်ဆက်နိုငျသောယူဆချက်အပေါ်မှာကျိန်းဝပ်, ထိုသို့မှန်သည်မည်မျှမကြာခဏအမြဲအံ့သြစရာင်.
နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏နာမတျောအားဖွငျ့နောက်တော်သို့လိုက်စာရိုက် "Bacon အရေအတွက်" ကီဗင်ဘေကွန်၏သူတို့ရဲ့ဒီဂရီကြိုးစားကြည့်ပါနှင့်တွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်. လွယ်ကူသော.
လိမ္မော်သီးနှိုင်းယှဉ်ပန်းသီး, fiiiiiight! ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သင်တစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်ပျေါမှာဆိုရငျ, သို့မဟုတ်ပဲထိပ်တန်း Trump တူအစားအစာများကိုနှိုငျးယှဉျခငျြ, သငျသညျကယ်လိုရီတစ်ပျက်ပြားအတွက်အနိုင်ရသောတဦးတည်းတွေ့နိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော "လိမ္မော်သီး vs ပန်းသီး" အဖြစ်တစ်ရှာဖွေရေးချပြီးသူတို့ရဲ့ရထားတယ် side-by-side စာရင်းပြုစုလိမ့်မည်, သကြား, ဆားငန်, ဗီတာမင်စသည်တို့ကိုအဘို့ကိုတစ်ဦးလျှင်.
အဘိဓါန် Klingon အတွက်ကိုရှာဖွေခြင်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Google ကဘာသာစကားများနှင့်အတူအချို့သောပျော်စရာရှိပါတယ်. အဲဒီမှာင် ပင်လယ်ဓားပြ Google က, Elmer Fudd Google က နှင့် Google က hack က, ဒါပေမယ့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည် အဘိဓါန် Klingon Google က. ကံကောင်းပါစေအဘယျသို့သောသူအပေါင်းတို့သည်နည်းလမ်းထွက်အလုပ်လုပ်.
ရုံ "ကိုတင်?သင်၏ Google URL ကိုရဲ့အဆုံးမှာ HL = XX-Klingon " (google.co.uk/, ဥပမာအားဖြင့်) နှင့် အဘိဓါန် Klingon အတွက် ylnej.
တဲ့ request ကို
သငျသညျတဲ့ request ကိုရှာဖွေပါတယ် - ဘယ်ကြောင့်တဲ့ request ကိုရှာမရ? ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Google ရဲ့ပရိုဂရမ်ကိုအများဆုံးထက်ပိုပြီးကောင်းတစ်မလိုလားဟာသပျော်မွေ့. "တဲ့ request ကို" ကိုရှာဖွေခြင်းသင် "တဲ့ request ကို" ကိုဆိုလိုခြင်းရှိမရှိသင်ကမေးတယ်, သောသင်ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခါ,, သင်တဲ့ request ကို "တဲ့ request ကို" ကိုဆိုလိုခြင်းရှိမရှိမေးတယ်.
တစ်ဦးလိုလားသူများကဲ့သို့ရှာဖွေရေးသုံးစွဲနည်း: 10 Google နှင့်ကျော်လွန်ဘို့အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်
← လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖို့အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေလာကြ Microsoft က Band2ဆန်းစစ်ခြင်း: အများစုမှာအစွမ်းထက် →